Pro Axmed Ismaacii samatar oo dhulka ku jiiday beelaha Hawiye iyo Daarood Daawo muuqaalka - iftineducation.com
Pro Axmed Ismaacii samatar oo dhulka ku jiiday beelaha Hawiye iyo Daarood Daawo muuqaalka
iftineducation.com – Pro Axmed Ismaaciil Samatar ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu uga hadlay arimo badan oo Quseeya guud ahaanba soomaaliya, waxaana ugu horayn wax laga waydiiyey Shirkii IGAD ee dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay inuu shirkaasi yahay Badhaadhe, Maadama magaalada muqdisho mudo dheer kadib lagu qabtay Shir ay isugu yimaadeen wadam dhowr ah.
Pro Samatar ayaa sidoo kale wuxuu si adag uga hadlay magacaabista RW Cumar iyo golohiisa wasiirada, Wuxuuna ku eedeeyay in Beelaha Daarood iyo Hawiye ay qaataan Labada Jago ee u saraysa dalka, dadka kalana Hanbada la siiyo.
Wuxuu sheegay in Wasiirka arimaha debeda Soomaaliya Dr: Bayle aanu waxba kala socon Wasaaradiisa awoodna uusan u lahayn inuu magacaabo Safiiro, Wuxuuna sheegay in warqad diyaarsan loo keeno kadibna uu Saxeemo.
Geesta kale waxaa uu siwayn uga hadlay Qabyaalada curyaamisay maamulka Labaxay Somaliland, Isagoona siwayn uga canaantay Tv-ga oo waraysigiisu socday, Sidoo kalana waxaa qayb ka ah waraysiga Heeso uu Qaadayo Prof: Samatar.
Waraysiga Marwada Madaxweynaha Oo la isku heesto -Daawo
Arooskaaga sidaan in laguu galo ma jeclaan lahayd -Muuqaal cajiib ah